Yusuf Garaad: Cawke
Abdishakur Abdillahi 30 December 2015 at 10:04
Ikraan Caraale mar uu Cowke (AUN) wareysanayay ayuu waydiiyay fanaaniinta qofka ay ugu jeceshahay ama ay ku dayato, markaas ku jawaabtay Khadra Daahir, maamadii fanka... Markaasu yidhi hayee... Anna maalin baan is lahaa Alla taloow tan yar maxeey kasoo lug'gooyeene....
Allaah ha u naxariisto Cowke!!
Salman Nogsane 30 December 2015 at 10:17
Allaha unaxariisto waxaa ladhihi karaa cawke waxa uu ahaa matxafkii warbaahinta somalia
Maxamud Bahaley 30 December 2015 at 10:27
Yuusuf garaad cumar illahay samair ha inaga siiyo
Marxuum Axmed xassan Cawke
Sheekoyin xusuus mudan baa nala wadaagtay
Kuwa kalena waa kaa sugaynaa hadii rabi idmo.Mahadsanid
Maxamud Bahaley 30 December 2015 at 10:29
Abdiaziz ismail 30 December 2015 at 10:45
Kursi hawada u furan ayaan qoraalkaan ku akhriyey, markaan sheeka dhameyyoba waxbaa i kilkileynayey oo waan iska ruxmaayey qosol dartiis. ilaahay Firdowaa haka waraabiyo.
Mohamed Adow 30 December 2015 at 11:17
ALLE HA UNAXARIISTO WALALKEEN COWKE.
wuxuu ahaa nin ay dadku wada jecelyihiin.
Cabdullahi Caydaruus 30 December 2015 at 11:36
mahadsanid yuusuf garaad illahay ha u naxariisto cawke
Abdulkadir Mohammed Nur 30 December 2015 at 12:21
Wallaaahy waa Sheekooyin aad iyo aad u qiima badan.. Cawke wuxuu ahaa Wadani usoo shaqeeyay Dalkiisa... Laakiin Yusuf Garaad waxaad ka ilowday Sheekooyinkii Cawke ee Barisamaadkii iyo Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho..
Mohamed Abdulqadir Hassan 30 December 2015 at 12:31
aad ayaad u mahadsan tahay abti yusuf
marna waxan ku qoslaa sheekoyinka cowke markan so xasuusto
marna waxaan kanaxaa geeriga cowke
lkn Soomali oo dhami niyada way ku haysaa
ilah ha uraxmado
Mohamed Ahmed 30 December 2015 at 13:28
Ilaahay ha u naxaristu nin maad badan ayu ahaa Cawke.
Wakaalada Wararka Solna 30 December 2015 at 14:06
Alle ha u Naxariistee Marxuun Axmed Xasan Cawke Wuxuu Deegaamada Somaliland ku Arkay Luuqad Lagu Wada Hadlo oo Soomaali Iyo English la Isku Badhxay ah, Waa Dad Reer Miyi ah oo qolooyin Sheegta Hay’ado ay Tababar Siinayaan Sheeko ayuu ka sameeyay Inkastoo markii danbe ay Rag qorayaal ahi Maqaalo ku ladheen Sheekadaas Wuxuu Yidhi Waxaan Arabsiyo ku soo arkay Odayaal aan English aqoon oo Geed hoostii Hay’ado Maxali ah Local NGO ay tababar siinayaan Waaba la is af garan la’ yahay Raga Khubarada Sheeganayaa Waxay Leeyihiin Sidan “ Ugu horayn Waxaynu isu qaybinaynaa Groups Waxaan idinla Socodsiinaynaa Markii aannu apply-garaynay fund-kii project-tigu u baahnaa, waxa attractive noqday aims-kii iyo objectives-kiisii oo ahaa qaar implementation-koodueasy yahay. Therefore waxa uu noqday program successful ah.
Maxamed 30 December 2015 at 17:37
Mahadsanid, Garaad, xusuusta aad nala wadaagtay, ee sxb kaa, Cawke.
Nibigu(scw) wuxuu yidhi: qofka dabeecadda fcn iyo anigu jannada sidaasaannu ku nahay, isagoo labadiisa farood ku tilmaamaya.
Wxn dhashay, dhammaadkii 70yada, Cawke oo xiddig iyo halyey qaran ah. Xamar deris ayaan ahay, wali ma xasuusto anagoo ciyaal ah oo kubad ciyaarayna, oo intuu na soo ag maray, aan noo dhoollo caddayn ama aadan moodin aabe ku soo baxay ciyaal uu dhalay, oo uu meel fog kaga maqnaa farxadda wajigiisa ku taallay.
Wiilkiisa, oo wxn daawaday, ka sheekaynaya inuu ahaa aabe faraxsan, oo mar walba ka qosliyo. Taas cid dafiri kartaa ma jirto.
Shakhsiyan u la ma kulmin, lkn wxn ogayhay, inuu ahaa ahaa shakhsi Ilaahay awood u siiyay inuu dadka uu la kulmo, ciyaal kubad ciyaaraya, madax, fanaaniin, ajnabi iyo cid walba ay dareento farxadda ka soo maaxanaysa gunta qalbigiisa ee aan ahay foolal la fayday iyo qosol aan qalbiga ka iman.
Cawke jid ha kaagaga soo hor baxo, la kulan, daawo, dhagayso ama qof yaqaanay ha kaaga sheekeeyo, waa isku mid: wxd dareemi farxad, wxd iloobi wixii adi kugu furnaa.
Wuxuu ahaa iftiin. Ilaahay qabriga ha u ifiyo.
Ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo.
Ciyaalkiisa iyo ehelediisa iyo waliba asxaatiisa,sida Yusuf Garaad, samir iyo iimaan.
nuradin mohamoud 30 December 2015 at 17:50
nuradin mohamoud 30 December 2015 at 17:52
Cawke tiir ka baxay dadka somalida ayuu ahaa
Ahmed 30 December 2015 at 19:01
Alle haw naxariisto Amiin. wad mahadsan tahay Yusuf. waxaan aad igu qoslay ninkii yidhi anigu cidna ku tiirsan mayo lakin kii igu tiirsada walee waxbaa na kala qabsan kkkk
M. Mohamed M. Hassan 30 December 2015 at 20:27
Mar waxan ka murugaysan ahay geerida ninka sidaa u qaaliga ahaa waxay se taydu iska sahal noqotaa marka aan sawirto xanuunka ay geeridiisu ku reeban karto ehelkiisi iyo asxaabtiisii gaarka ahayd sida, Yuusufow, adiga. RABBI ha u naxariisto Axmed Xasan Cawke. Aad ayaad ugu mahadsan tahay qoraalkan oon aqristay anigoo dareemaya sida inaan goob-joog ahaa xilligii uu Cawke weeraha iyo ficillada ku jira samaynayay.
Said Warei 30 December 2015 at 21:24
2002 ayaan booqday laanta afka Soomaaliga ee BBC Bush House. Markii la gaaray saacaddii warka, Studiyaha ayaan u raacay Cawke oo ahaa xiriiriye, Axmed Cabdi Nuur oo ku qornaa war aqris iyo Koronto oo ahaa soo saare. Markaan ka soo baxnay studiaha, waxaa naga haray Cawke iyo saaxibkiis Axmed Cabdi Nuur si ay sigaar usoo cabaan. AUN Cawke ayaa igu yiri 'kaali oo sigaar nala cab' Jannatul firdowsa Allaha ka waraabiyee Cawke wuu dareesanaay in aan u ekeen dadka sigaarka caba asagoo igu tuhmaayo wadaadnima.Waxaan uuga jawaabay in ay hooyadeey ii oggoleen sigaar cabid. Cawke in uu qoslay ayuu igu "hayaay war garka weyn arka!!! hooyadaa ma aha waxa kuu diiday sigaar cabid ee garkaaga weyn weeye".AUN Cawke wuxuu iila kaftamaay maalintaas sida nin ay Saaxibbo ahaa yeen muddo dheer.
Waxaan ilaah u weydiinayaa in uu ka badbaadiye cadaabta qabriga, Aakhirana Jannatul firdowsa ka waraabiya. Aamiin dhaha
Waxaam Jeynayaa Inaad Sii Wadi Doonto Waxbixinadaada Si Bulshadeenu Maskaxiyan Wax Badan ay U Ogaato
Keyse Hassan 31 December 2015 at 19:06
Wuxuu ahaa magaalo socota
Keyse Hassan 31 December 2015 at 19:45
Magaalo socota ayuu ahaa ee ilaahey ha unaxariisato walalkeen.
Luuliyo 1 January 2016 at 02:57
Waa xasuus caaqibo leh. Mahadsanid Yusuf. Waxaan ka helay saaxiib bandowga iga qaad.
khalid ibrahami 12 January 2016 at 18:20
Sanafkii 2014kii waa markii igu horaysay ee aan indho saaro Ahmed hasan owke alle ha u raxamdee. Waxaan Ku kulanay hotel maansoor we magaalada hargeisa. Waxaan isugu nimi Shir lagaga hadlayay hablaha waxbarashoodada, iyo sida ay hablaha miyaga jooga iyo kuwa magaalada jooga in aanay u siinayn jaaniska yar ee ah in hablaha wax La Baro. Shirka waxaan soo qaban qabiyay hayaada SAVE THE CHiLDREN. Iyo UKAID. Dadka meesha kasoo qayb galay waxay ahayeen aqoon yahano leh waayo arignimo aan la gaadhayn. Dadka waxay ahayeen dadka u shaqeeya hayaadaha international ka ah iyo kuwa local ka ah. Waxaan ugu yaraa aniga iyo dhowr arday oo ka socotay jaamacada hargeisa qaybteeda arimaha bulshada. Shirku markuu noo socday in Ku show saacad Ayaan waxaa nasoo galay Ahmed hasan owke iyo saxiibkii abdisalan hereri. Markiiba salaan gacaltooyo oo diiran ayuu naga jagac siiyay. Ka bacdina kursi ii ag yaalay oo banana ayuu soo fadhistay. Shirkii halkii ayuu kasii socday inantii facilitate garanasay shirka oo ahayd ajaanib ayaa dadkii waydiisay sida ukala duwan yihiin hablaha miyaga jooga iyo hablaha magaalada jooga marka laga hadlaayo waxbarashada aasasiga ah. Ahmed Ayaan jawaabtii qabsaday waxaa uu ka sheekayay nolosha dhaqan dhaqaale Ku xeeran nolosha miyiga.mar wuu naga qosliyaa mar wuu naga qayriisiya. Dadkii meesha isugu yimi ee ka shaqanayay field kaas cid axmed xasan cowke xaqiiqda ugu show ma jirin. In Ku dhow rubuc sàac ayuu nala wadaagay sheekeyon isku laaman oo marna yadadiilo iyo farxad Ku galinayaa. Marna murugo iyo muusenow kugu abuuraya oo Ku saabsan hablaha wax bartay we soomalida oo marka danbe noqday (iron lady). Ahmed waxuu ahaa iftiin iyo hilàac ka dhex ifayay umada somaliyeed waxuu ahaa shaksiyad a an hour loogu arag umada soomaliyeed. Sidoo kale waxuu ahaa tiir umada soomaliyed ka baxay. Alle ha u raxmado. Aamin aamin